အဆိုပါဒေတာ DV-2017 ထီကနေခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းပြည်အတွက်အနိုင်ရခြုံငုံအခွင့်အလမ်းတွေကိုပြသထားတယ်နှင့်လည်းထီအနိုင်ရသောသူတို့အဘို့ပျက်ကွက်မှုနှုန်းရာခိုင်နှုန်း, ဒါပေမယ့်အဆုံး၌ဗီဇာရဖို့မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
table ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အဆိုပါနိုင်ငံများတွင်: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ဘရာဇီး, ကနေဒါ, တရုတ် (ပြည်မဖွား), ကိုလံဘီယာ, ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ, အီကွေဒေါ, အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ, ဟေတီ, အိန္ဒိယ, ဂျမေကာ, မက္ကဆီကို, နိုင်ဂျီးရီးယား, ပါကစ္စတန်, ပီရူး, ဖိလစ်ပိုင်, တောင်ကိုးရီးယား, ယူနိုက်တက် (မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် မှလွဲ. ) ဒမ်း, ဗီယက်နမ် DV-2017 ဘို့အရည်အချင်းမပြည့်မှီခဲ့ကြသည်ဤသို့ဤနိုင်ငံများအနေဖြင့်လူအထီအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနိုင်ဘူး။
အဓိကတွေဟာလည်းအဖြစ် DV ထီပုံစံတင်သွင်းသူတွေကိုစုစုပေါင်းအရေအတွက်
Selected တွေဟာလည်း (Winners)
ရွေးထားသော မှစ. ဗီဇာမှ Pass ကိုနှုန်း
နောက်ဆုံးတော့အစိမ်းရောင်ကဒ်ဗီဇာတယ် (မိမိတို့၏အနကျအဓိပ်ပါယျအပါအဝင်) ကိုထီအနိုင်ရသူကိုလူများ၏ရာခိုင်နှုန်း
စုစုပေါင်းတွေဟာလည်း Per ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ